Art of Living - Myanmar Real Estate, Condo for sale and rent | ShweProperty
BankLegal Consultants Finance & Legal
Leo Shine (International) Co.,Ltd
No 694, 4th Street, 1 Ward Mayangone Township, Yangon
Flooring Legal Consultants Just Ask Tel:
no 185 50st Puzundaung township Yangon Category:
Legal Consultants Asia Wood Co.,Ltd. tst
24, Myawaddy Min Gyi Rd., Industrial Zone (4)
Bank Design & Decorate နောက်ဆုံးရ ဆောင်းပါးများ
နည်း (၇) သွယ် သိရုံနဲ့ ပိုက်ဆံစုနိုင်ပြီ
လူတိုင်း ပိုက်ဆံ စုချင်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ တော်တော်များများက ပစ္စည်း အသစ်အဆန်းလေးတွေ ဒီဇိုင်းအသစ် အဆန်းလေးတွေ ပေါ်ပြီဆိုရင် အပြိုင်အဆိုင် ဝယ်ချင်ကြတယ် မဟုတ်လား။ ပိုက်ဆံ စုမယ်စုမယ်ဆိုတာလည်း…
အောင်မြင်တဲ့ ဘဝလေးတစ်ခုကို ရောက်ချင်ရင် ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမယ်ဆိုတဲ့ အတတ်ပညာလေးတော့ သိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ပိုက်ဆံတွေဖြုန်းမိရင် မိမိဘဝတိုးတက်ဖို့ အချိန်ပိုပြီး ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။…
ဘဝကို ဟန်ချက်ညီညီနေထိုင်ဖို့ ပိုက်ဆံစုနည်း (၆) နည်း
ဘာဝယ်ဝယ် ဝယ်တဲ့ဆိုင်၊ ပစ္စည်း စတာတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့ အကျင့်လေးလုပ်ထားပါ။ ၁ – အပြင်ထွက်ဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင် ဈေးဝယ်စာရင်းလုပ်ပါ။ လုပ်ထားတဲ့ ဈေးဝယ်စာရင်းကိုလည်း သစ္စာရှိပါ။ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ စာရင်းနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့…
ငွေကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲ အသုံးချမလဲ?
ငွေဟာ မီးလိုပဲ သုံးတတ်ရင် အလွန်အကျိုးရှိသလို မသုံးတတ်ရင်တော့ ဘေးဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့သူတွေကြည့်မယ်ဆိုရင် အများစုဟာ ငွေကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲကြသူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုပင်သေးငယ်သော အသုံးဖြစ်ပါစေ…
ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုဆီသို့ ဦးတည်လျှောက်လှမ်းနိုင်မယ့် ခြေလှမ်း (၉) ခု
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလာဖို့ နဲ့ ကိုယ်လုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကို ကိုယ်တိုင်ကျေနပ်မှုရှိနေဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြမယ့်အချက်တွေက ဘဝမှာ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိရှိ…
ငမွဲအဖြစ်အား ရပ်တန့်ဖို့အတွက် ဒါလေးကို ခဏအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား
သင်ရဲ့ လစာနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ သင့်လက်ချောင်းတွေ ကြားထဲက ထိန်းလို့မရအောင် ကြပ်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်နေပါလား. ? သင့်အနေနဲ့ နေ့ရော ညရော ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ လူနဲ့ မတူအောင် အလုပ်တွေ လုပ်နေရ သလိုမျိုး ခံစားနေရတာတောင် သင်လက်ထဲမှာ…
အချို့က ချမ်းသာချင်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ချမ်းသာမလာဘူး၊ တစ်ခါတလေ ၀င်ငွေက ကြမ်းသလောက် ဘာကြောင့် မချမ်းသာရတာလဲဆိုပြီး သိချင်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါ အချက်(၇)ချက်ကို ရှောင်ပါလို့…
အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ အောင်မြင်ရေးအချက် (၅) ချက်
သင် ဘယ်လောက်အောင်မြင်နေသလဲ။ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်နေပြီလား။ ရာထူးတွေတိုးနေလား။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကရော အောင်မြင်နေပြီ လား။ ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် စိတ်တိုင်းကျအဖြေ မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာတွေ့ရတဲ့…
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အောင်မြင်ဖို့ အပြောင်းအလဲလေး (၈) ခုလောက် ပြောင်းလဲကြည့်စို့
သင့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အောင်မြင်ဖို့ အပြောင်းအလဲလေးနည်းနည်း လုပ်ချင်ပါသလား။ လူတွေဟာ သူတို့ဘ၀တွေကို ပိုပြီးတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘယ်ကစပြီး လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ မသိကြပါဘူး။…
ချမ်းသာစေသော ငွေသုံးနည်း (၃) ချက်
ဘာလို့ အလုပ်ပဲ အမြဲလုပ်နေရပြီး ကံတရားကမျက်နှာသာမပေးသေးတာလဲ။“ချမ်းသာဖို့ အလုပ်လုပ်နေတာကွ။ရှာသမျှပိုက်ဆံက ဘာလို့ခဏ နဲ့ကုန်သွားရတာလဲ“လို့ရော တွေးဖူးပါသလား။တွေးဖူးတဲ့သူတွေအတွက် ချမ်းသာဖို့ ငွေကို အကျိုးရှိစွာ…
28.00 သိန်း ဧရိယာ6400 sqft
20.00 သိန်း ဧရိယာ2000 sqft
20.00 သိန်း ဧရိယာ2500 sqft
3,000.00 USD ဧရိယာ1850 sqft
1,500.00 သိန်း ဧရိယာ1350 sqft
2,300.00 USD ဧရိယာ1832 sqft
16.00 သိန်း ဧရိယာ3000 sqft
3,500.00 USD ဧရိယာ2520 sqft
18.00 သိန်း ဧရိယာ1250 sqft
3,500.00 USD ဧရိယာ3500 sqft
15.00 သိန်း ဧရိယာ1350 sqft
Art of Living Business Directory
Construction ArchitectsBathroom Curtains & Blinds Design & Decorate FlooringFurnitureHome AutomationKitchenLightingOffice Cubicles PaintingRenovateWall Coverings Bedroom Landscaping Home Move & Store
Vehicle Rental StorageMoving Finance & Legal
BankLegal Consultants Living Style and Home Services
CarsAir ConditionerCleaning ServicesHealth Art of Living Business Directory
Shweproperty.com တွင် သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ထည့်သွင်း ကြော်ငြာနိုင်ပါပြီ
ဆက်သွယ်ရန်.. ၀၉ ၄၃၀၇ ၄၉၄၆ ၊ ၀၉ ၇၃၂၁ ၅၀၆၂